कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतबाट ३९ जना संक्रमित डिस्चार्ज भए - SatyaPatrika
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतबाट हालसम्म ३९ जना कोभिड संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् ।
यहि वैशाख २३ देखि प्रदेशमै पहिलोपटक प्राकृतिक वातावरणसहितको आइसोलेसन कक्ष संचालनमा ल्याइ कोभिड-१९ संक्रमितहरुको उपचार सुरु गरिएको थियो । योग हललाई नै आइसोलेसन कक्षमा रुपान्तरण गरेर संक्रमितको उपचार गरिरहेको प्रदेश आयुर्वेद औषधालयमा हालसम्म ६३ जना संक्रमित भर्ना भएका छन।
जसमध्य १३ जनालाई थप उपचारका लागि रेफर गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । त्यस्तै, एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जनाले उपचार गराइरहेका छन् । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागबाट जारी गरिएको निर्देशन अनुसार औषधालयमा उपचार भइरहेको छ।
औषाधालयले १५ वेडको आफ्नै आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिमार्फत संक्रमित निको पारेर घर पठाउन थालेको औषधालयका प्रमुख डा. शंकरप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । औषधालयमा उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै ९० प्रतिशत जडिबुटीबाट संक्रमित बिरामीको उपचार गर्दै आइरहेको उनको भनाई छ ।
‘हामीले स्थानीय उत्पादित जडिबुटी र यहाँ नपाउने भएपछि बाहिरबाट ल्याएर पनि बिरामीमा देखिएको लक्षणका आधारमा आयुर्वेदिक औषधी दिने गरेका छौँ’ ,डा. रिजालले भने, ‘अहिलेसम्म यहाँ आउनु भएका बिरामीहरुलाई हाईफ्लोमा अक्सिजन चाहिने भयो भनेमात्रै रिफर गर्ने गरिएको छ ।’
उनका अनुसार अहिले कोरोना संक्रमितलाई च्याबनप्रास, गुर्जो, एस्टेमधु, असुरोको पात, सितपलादी, अमृत चियाजस्ता स्थानीय उत्पादित जडिबुटीबाट उपचार गर्ने गरिएको छ । यसका साथै औषधालयले आइसोलेसन कक्षमै बिरामीका लागि बिहान योग, ध्यान, प्रणायाम, ब्रिथिङ एक्ससाईज जस्ता क्रियाकलाप गर्ने गरेको छ।
औषधालयले विभिन्न साझेदार सरोकारवाला निकायको सहकार्य र समन्वयमा कोरोना संक्रमितका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवासमेत सुरु गरेको छ। साथै निशुल्क अमृत भोजनको समेत व्यबस्था गरिएको डा . रिजालले जानकारी दिए ।
नवनियुक्त मन्त्रिले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
बँदेललाई थापेको पासोमा परी ५४ वर्षीय पुरुषको मृत्यु